Haddii aad caqli leedahay hadda waa waqtigii aad iibsan lahayd Samsung Galaxy S7 | Androidsis
Haddii aad caqli leedahay hadda waa waqtigii aad iibsan lahayd Samsung Galaxy S7
Francisco Ruiz | | Mobiles, Samsung
Samsung ayaa hadda soo bandhigtay Samsung Galaxy S8 iyo Samsung Galaxy S8 Plus, oo sidii ay ku soo socotey, qof walba wuxuu u orday inuu leefleefiyo nabarradiisa, (in ugu yaraan la yiraahdo), isla shirkadaas oo in yar ka hor ay cid walba bushimaheeda ugu jirtay Walxaha qarxa ee Samsung Galaxy Note oo xitaa lagu sii daayay ciyaaro fiidiyoow caan ah sida Grand Theft Auto.
Ku dhowaad qofna ma xasuusto fadeexadda mar dambe,Fadeexad weyn oo ka dhalatay Samsung Galaxy Note 7 !!, aad ayey uga yartahay waxay ku xasuusan doonaan gaffer ama shit ka yimid dalal badan oo Kuuriya ah oo ay waqti ku soo qaateen. Shit weyn sida Fadeexad Dhimasho ah oo Samsung Galaxy S3 ah, mashaakil lagu xaliyay balastar balaadhisay cimri dhererkan boosteejooyinka ilaa inta uu ka dhamaanayo damaanada rasmiga ah ka dibna hadaan ku arkay ma xasuusto. Sikastaba, sababta qoraalkan ayaa ah mid aan ka aheyn inaad ugu baaqeyso degenaansho, caqli yar noqo oo qof walba u dig Ha ku degdegin inaad iibsato ama keydiso mid ka mid ah Samsung Galaxy S8 ama S8 Plus, tanUgu yaraan ilaa aan eego oo isbarbardhigo xulashooyinka kale ee aan awoodno, waxaan xitaa u fiicanahay sida Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus cusub Mabda 'ahaan wax fikrad ah kama lihin sida ay ku soo baxayaan ama haddii ay noqonayaan hub kale oo lagu tuuro ama lagu qarxiyo gacanta adeegsadayaasha horay u sii wataya keydka garoonka..
Aan wax yar sharxo si aanad gacmahaaga madaxa ugu tuurin, adoo ku fadeexoobay fikirradayda mugdiga ah; xaqiiqadu waxay tahay qofkasta oo laba farood foodda hore iyo in yar oo caqli gal ah leh, intaanu u cararin dalbo meel ku dhow kun euro oo aynaan wax fikrad ah ka haysan sida ay ku noqon doonto xagga tayada, iyo in ka sii badan iyada oo la tixgelinayo qaraxyadii ka dhacay Xusuusta 7 ee horseeday guud ahaan ka bixitaankeeda suuqa caalamiga, wax dhowaan la dhaho laakiin taasi waa fadeexad weyn iyo guuldaro weyn Samsung; Kahor intaadan galin lacagtaas xushmada leh ee ciyaarta, taas oo inbadan oo naga mid ah ay tahay buruq, waa macquul in laga fikiro sugida waxyar si ay ugu sii socoto iibkeeda si rasmi ah iyo in terminal-ka uu bilaabo inuu ku soo baxo halkaas si loo arko waxa noocaas ah sharadkan cusub ee Samsung.
Waa sidaas cilladaha badankood guud ahaan waxay ku dhacaan dufcadii ugu horreysay ee boosteejooyinka la iibinayo, taas oo aanan xitaa rabin inaan dhaho waxay ku dhici doontaa sidan cajiibka ah ee cajiibka leh ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus, in kasta oo ay tahay suurtagal in ay jirto taasna waa sababta ka dib marka la arko, waxaa fiican in la ogeysiiyo ama ugu badnaan digniinta amniga.
U dhaqaaqida wixii socday iyo waxa ugu muhiimsan ee aan rabo inaan kaga faaloodo qoraalkan, laga yaabee inay tahay waqtigii la dooran lahaa, halkii laga dooran lahaa iibsashada Samsung Galaxy S8 ama S8 Plus, go'aamiso mid ka mid ah horay loo xaqiijiyay aad u fiican Samsung Galaxy S7 ama S7 Edge in hadda ay ku jiraan qiime aad iyo aad u jaban.
Sidaas awoodi karo waa Samsung Galaxy S7 tusaale ahaan Waxaan ku heli karnaa kaliya 444 Euros dukaanka Amazon adoo gujinaya xiriiriyahan.
Haddii waxa aad doorbidayso oo aad jeceshahay ay yihiin xarkaha qalooca ee Samsung Galaxy S7 Edge, markaa waa inaad fargeeto xoogaa lacag ka badan tan iyo hadda Waxay isku Amazon yihiin 519 Euros adoo gujinaya isla xiriiriyahan.
Sikastaba, oo markii ay arkeen waxa Samsung ay naga haystaan, waxay na siinayaan mid ka mid ah nuuradda iyo mid kale oo ciid ah, hadda waxaa loo malaynayaa midka taabta nasiib wacan inuu imaan doono, in kasta oo aan anigu shakhsi ahaan haddii aan awood u leeyahay dhaqaale ahaan oo aan u baahanahay inaan beddelo Taleefannada casriga ah, taas oo aan ahayn kiiskeyga labada kiis midkoodna, Ma dooranayo inaan iibsado Samsung Galaxy S8 ama S8 Plus cusub maadaama wax aad u yar aan heli karno Samsung Galaxy S7 ama S7 Edge oo ah labada terminaal ee ugu wanaagsan sanadka 2017.
Sikastaba hadaad geesi tahay oo aad rabto halis u geli lacagtaada iibsiga mid ka mid ah Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus cusub, halkan ayaan kaaga tagayaa iskuxirka tooska ah ee boos celinta labada terminaal ee dukaanka Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Haddii aad caqli leedahay hadda waa waqtigii aad iibsan lahayd Samsung Galaxy S7
Fiid wanaagsan Francisco. Sida aad ku tiraahdo boostadaada, hadda waa waqtigii aad ku iibsan lahayd S7 qiimo wanaagsan oo aad u aragto sida s8 ay isu beddesho…. Had iyo jeer waan sameeyaa si isku mid ah, waxaan rajeynayaa in guuldarrooyinka unugyada ugu horreeya ay muuqdaan (had iyo jeer maahan) si ay u noqdaan kuwo hagaagsan oo la hagaajiyay.
Shakigeygu wuxuu yahay inaad kahadasho S7 sida ugufiican ee sanadka 2017. Ma joojin karo aqrinta / dhageysiga xitaa kuwa mobilada ku iibiya dukaamada (tani wey i walwal gelineysaa) waxay igu dhaheen ha iibsan S7 ama waalan oo bixisay dhibaatooyin badan, haa khadka cas, haddii shaashadaha ay dhibaatooyin bixiyaan oo waan waalanayaa.
Ma ii sheegi kartaa hadii ay run tahay mise maanta ayaa la xaliyay? Ma jecli inaan qashinka ku tuuro 500 oo euro.
Aad baad ugu mahadsantahay horay.
Gabi ahaanba waan ogolahay. Taabadalkeed "Haddii aad caqli leedahay hadda waa waqtigii AANAD iibsan lahayn Samsung Galaxy S7".
Waxay ku guuldareysataa in ka badan qori caaradii goobta lagu ciyaaro. Samsung waxay nooga tagtay telefoonno aad u wanaagsan sida Galaxy-ga koowaad ama S4 laakiin S7-kan iyo gaar ahaan EDGE waa dhab "sanduuq yaab leh."
Haddii aad tahay FOOL hadda waa waqtigii aad iibsan lahayd Samsung Galaxy S7….
Tani waa sida Ulefone Power 2 GPS u shaqeeyo
[APK] Waa barnaamij aqoonsan miyuusigga aad dhageysaneysid oo kugu tusaya adiga Tube